Anyị nwalere NES30 nke dịpụrụ adịpụ, dị mma maka ndị na -eulaomi | Androidsis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Noticias, Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nyocha
Ezie na ọ bụ eziokwu na na gam akporo enwere egwuregwu dị egwu, Otu n'ime ike dị ukwuu nke sistemụ nrụọrụ Google bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke emulators na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ndị ahụ egwuregwu vidio nke gosipụtara oge anyị bụ nwata.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ n'anya ochie egwuregwu ị nwere ike ghara uche a NES30 nyocha dịpụrụ adịpụ, a joystick arụpụtara site 8BitDo na na na-anọchi maka ya imewe dabere na akara nke Nintendo mbụ desktọọpụ console.
1 8BitDo NES30, onye njikwa NES maka ngwaọrụ gam akporo gị
3 Icheta oge ochie
8BitDo NES30, onye njikwa NES maka ngwaọrụ gam akporo gị
Ozugbo ị mepee igbe ị ga - ahụ na otu nke 8BitDo ejiriwo nlezianya lekọta ngwaahịa ha na-enye ihe ngosi na-enweghị ntụpọ. Mgbe ị na-eleba anya n'ime, ị ga-ahụ ebe dịpụrụ adịpụ, ntuziaka na obere igbe abụọ.
Otu n'ime igbe ndị a nwere eriri USB iji kwụọ ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ jikọọ ya na kọmputa ahụ, ma nke ọzọ nwere ezigbo ihe ịtụnanya: a Eriri iche ncheta igodo nke afọ 30 kemgbe Nintendo webatara NES nwere edemede ndị a n'asụsụ Bekee: "Na ebe nchekwa nke FC kemgbe July 15, 1983 ". N'akụkụ nke ọzọ ọ na-ekwu "Maka ncheta obi ụtọ nke ụbọchị ochie". Nke ahụ kwuru, ha ejirila nlezianya dezie ha.
Gịnị kpatara o jiri kwuo FC30, ọ bụghị NES30? Ọ bụrụ n ’ịjụ ajụjụ a, ị maghị akụkọ banyere Nintendo nke ọma.. The Japanese emeputa ulo oru console na July 15, 1983 na Japanese n'ókèala n'okpuru aha “Family Computer” ọ bụ ezie na ndebiri “FamiCon” e generalized.
Ihe nkwakọ ngwaahịa egosiworị na onye njikwa a abụghị naanị ọ joụ ọ bụla, ọ bụghị naanị ngwaọrụ anyị ga-eji egwu. NES30 bụ ngwa ga-echetara anyị ụbọchị ebube ochie ịchekwa ụmụ eze na ịkọwapụta ihe mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya na-enweghị ị attentiona ntị na njirimara eserese, mana ịnụ ụtọ egwuregwu dị egwu ya.
Enwere m ike ikwu obere banyere imewe. Ndị kacha ọcha nwere ike ịkatọ eziokwu ahụ 8BitDo etinyela bọtịnụ njikwa ọzọl, ma a gbagharala ha maka eziokwu ahụ na ntinye nke bọtịnụ abụọ n’ihu na ihe ndị na-akpalite elu na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ. Ghara ikwu ihe zuru ezu nke ha nwere mgbe ha na-echekwa nhazi na akwụkwọ ozi nke Nintendo ji na Super Nintendo njikwa, ka m kwesịrị ikwu Super FamiCon?
N'iji 122 x 53 x 16 millimeters mee ihe, mgbe ị buliri onye nchịkwa NES30 maka oge mbụ ị ghọtara na ụmụ okorobịa na 8BitDo ejiribeghị atụmatụ ya, ma na emecha na aka bụ nnọọ yiri nke mbụ remote. Ezigbo ọrụ na nke a. Ọzọkwa, ịbụ onye pere mpe na kemfe ị nwere ike iburu ya ebe ọ bụla.
N'elu nke dị n'ime ime anyị na-ahụ micro USB ọdụ ụgbọ mmiri na-esote obere LEDs abụọ. Ọdụ USB abụghị naanị maka iji chaja ngwaọrụ, ọ nwere 480mAh Li-na batrị nke ahụ na-ekwe nkwa nnwere onwe nke awa 20 na 1.000 na-akwụ ụgwọ usoro.
NES30 dakọtara na Android, Windows, Mac OS na IOS site na Bluetooth ma ọ bụ jikọta ya na eriri USB nke na-abịa na igbe ahụ. Banyere ndị LED, ha na-ama na ị mekọrịtala ihe dị n'ime ime na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị, yana n'ihi ọnọdụ ha, ha anaghị enye gị nsogbu mgbe ị na-egwu egwu.
Yana iwu anyị na-achọta nkọwa ọzọ na-atọ ụtọ: Xtander n'ọdụ ụgbọ mmiri . Imirikiti njikwa ndị na-etinye nkwado maka ekwentị gị nwere nsogbu ebe ọ bụ na ha ejedebe ojiji ha na oke ụfọdụ. N'ihe banyere NES30, ọdụ ụgbọ mmiri Xtander bụ nke kwụụrụ onwe ya, a na-etinye ya na ime ime ka ị nwee ike iburu ya ebe ọ bụla ma ọ dị ebube nkwado maka ama gị ma ọ bụ mbadamba.
Icheta oge ochie
Ọ bụ ezie na ntuziaka dị na Bekee na Japanese, O sighi ike ịghọta otu 8BitDo mpụta a si arụ ọrụ. Jide bọtịnụ mmalite maka sekọnd ole na ole, anyị ga-ahụ na acha anụnụ anụnụ na-amalite itabi na ihe fọdụrụ bụ imekọrịta ya dị ka ngwaọrụ ọ bụla site na ịgbalite nhọrọ Bluetooth na ngwaọrụ anyị. Oge ụfọdụ ọ na-ajụ gị maka koodu pin, nke bụ 0000.
Ozugbo imere nke a, ị ga - ahụ na ejiri obe, ma ọ bụ D-Pad, gafere menu nke ekwentị gị, ejiri X button iji gosi, ebe bọtịnụ A na B na - e imitateomi bọtịnụ azụ. Ọ bụrụ na ị gbanyere ekwentị gị, ị nwere ike hazie ọtụtụ nhọrọ site na ngwa 8BitDo, ị nwekwara ike bọtịnụ ihuenyo map na NES30 dịpụrụ adịpụ, ma achọrọ m igosi gị njirimara nke ngwaọrụ a maka ama ama ọ bụla.
Ihe ndi ozo bu na iwu NES30 dakọtara na ọtụtụ egwuregwu ọ bụ ezie na m na-atụle na n'ihi atụmatụ ya, na karịsịa n'ihi isi obe nke na-ejikọ njikwa, ọ na-adabere n'ụzọ doro anya i emomi egwuregwu retro.
Mgbe m meghere ọtụtụ NES na Super NES emulators juru m anya ịhụ nke ahụ bọtịnụ na-akpaghị aka ahazi n'ụzọ ziri ezi. Na agbanyeghị, NES30 joystick na-enye gị ohere ịkọwapụta igodo ya na emulator ọ bụla n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Oge eruola ka anyị nwalee ọtụtụ egwuregwu, ka anyị hụ etu NES30 joystick si eme. Iji kwuo na ahụmịhe ahụ enweghị ike ịbụ ihe ka mma. Onye njikwa NES30 na-arụ ọrụ dịka silk, nzaghachi nke akụkụ 8BitDo bụ ihe na-abaghị uru. Achọpụtabeghị m oge ọ bụla na ọ na-egbu oge ịzaghachi.
Otu isi ihe wutere m bụ isi obe isi. Ọ bụ eziokwu na imetụ aka yiri ka ọ dị ka igwe ntanetị mbụ, Afraidjọ tụrụ m na ọ ga-ata ahụhụ n'oge ọ na-egwu egwu. Ọ dịghị ihe dị anya site na eziokwu. Hụ imewe na obi nke ime, ihe ncheta keychain, n'ọdụ ụgbọ mmiri gị ebe ka gị ama ma ọ bụ mbadamba na ochie retro na exude dum set, m nwere ịchọ a ndudue. Ma ahụghị m ya.
Ana m anwale onye njikwa ahụ maka izu abụọ na obe isi na-arụ ọrụ otu ụbọchị. Ndị otu nhazi ahụ agbaala mbọ hụ na ogo nke NES30 dịpụrụ adịpụ enweghị ihe ọbụla ga-emere anyaụfụ. N'ikpeazụ, anyị ga-egosiputa nkọwa ọzọ dị oke mkpa: anyị nwere ike iji njikwa NES30 abụọ n'otu ngwaọrụ ahụ. Guysmụ okorobịa nọ na 8BitDo echeela ihe niile.
Pricegwọ ya? N'agbanyeghị ogo nke ngwaahịa ahụ, NES30 dịpụrụ adịpụ ọ na-efu naanị euro 29.95 y dị na agba atọ. Ọzọkwa kemgbe bargainmedia, Onye na-ekesa ngwa ahịa nke ngwaahịa a na Spain, emeela asọmpi na Facebook ebe ha na-agbanye ọtụtụ nkeji, gịnị ka ị na-eche ka ị debanye aha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » NES30, ihe dịpụrụ adịpụ maka gam akporo ngwaọrụ gị nke na-agwakọta ọhụụ na mma na nkenke
Download ugbu a ụdị nke Dolphin Browser nke nwere nkwado nke ala maka Flash na Android Lollipop na ọtụtụ ndị ọzọ
Nloghachi nke kpochapụwo na gam akporo na Star Wars: Knights nke Old Republic